Ogaden News Agency (ONA) – Maxkamada Turkiga oo Lahor Keenay Qaar Kamid Ah Saraakiishii Af-Gambigii Dhicisoobay.
Maxkamada Turkiga oo Lahor Keenay Qaar Kamid Ah Saraakiishii Af-Gambigii Dhicisoobay.
Taliyihii hore Ciidamada Cirka Turkiga, General Akın Öztürk iyo Taliyihii Saldhiga ugu wayn ee ay ka hawlgalaan Ciidamada Cirka Turkiga (Incirlik) ninka lagu magacaabo General Bekir Ercan Van, ayaa waxaa maanta la horkeenay Maxkamadda Magaalada Ankara.
Waxaa kaloo masuuliintan ku weheliyay 24 kale oo Janaraalo ahaa, ayaa sidoo kale ka soo muuqday Maxkamadda, waxaana lagu soo eedeeyay inay ku lug lahaayeen afgambigii fashilmay ee habeenkii Jimcadii gilgilay Turkiga.
Xafiiska Xeer Ilaalinta Turkiga, ayaa waxaa uu Saraakiishaasi uu ku soo oogay dacwad laxidhiidha in si buuxdo ugu lug lahaayeen afgambigii dhicisoobay, ee qorshuhu ahaa in lagu burburiyo dowladda uu hogaamiyaha ka yahay Madaxweyne Rajab Dhayib Erdogan..
Xeer Ilaalinta Turkiga, ayaa geed gaaban iyo mid dheerba u fuuli doonta, sidii ciqaab adag loogu qaadi lahaa Saraakiishaasi, laakiin waxaa la leeyahay ciqaabtaasi ka qayb maaha xukunka dilka ah.
Dhanka kale rasaas, ayaa laga maqlay agagaaraha Xarunta Maxkamadda Ankara, intii ay ka socotay dhageysiga eedeymaha loo haysto Saraakiishan. Ciidamada ammaanka ayaa toogtay nin la sheegay in uu rasaastaasi furay.
Turkiga, ayaa dad kumanaan gaaraaya u xidh xidhay afgambiga lafashiliyay, kuwaa oo u badan Saraakiil iyo ciidamaba. Waxaa kaloo jira ganacsato afgambiga lala xidhiidhinayo oo xabsiga ladhigay.
Laamaha ammaanka, ayaa weli baadigoob xoog lihi ugu jira xubno kaloo lala xidhiidhinayo afgambigan. Waxaa lasoo sheegayaa in Saraakiil iyo ciidamaba ay bilaabeen in ay ka baxsadaan gacanta sharciga, waxaana la aaminsan yahay in ay ku dhuumaaleysanayaan magaalooyinka dalkaasi.